“Dib ugu soo laabashada Cristiano Ronaldo ee Man United waa war u xun Donny van de Beek” – Wakiilka Xiddiga – Gool FM
(Manchester) 06 Sebt 2021. Wakiilka ciyaaryahan Donny van de Beek ayaa dareensan in dib ugu soo laabashada Cristiano Ronaldo ee Manchester United ay sii yareyn doonto kulammada uu xiddigan reer Holland ka ciyaari lahaa garoonka Old Trafford.
Laacibkan khadka dhexe ayaa weli u ciyaarin Kooxda Ole Gunnar Solskjaer xilli ciyaareedkan, waxaana uu keliya ku soo bilowday safar kulan oo horyaalka Premier League kal ciyaareedkii hore in 2020-21.
Haatan xiddiga xulka qaranka Portugal ee Ronaldo ayaa dib ugu soo laabtay garoonka Old Trafford, waxayna u muuqataa inuu Donny hoos uga sii dhici doono kulammadii yaraa ee uu ka helayey Man Utd.
Man United ayaa ku dhawaaqday soo laabashada 36-sano jirkaan todobaadkii hore, kaasoo ay ku soo qaateen lacag dhan 12.85 milyan oo gini kaddib markii uu go’aansaday inuu ka tago Kooxda Juventus.
Isagoo la hadlayey Ziggo Sport oo fadhigiisu yahay Holland, Wakiilka Van de Beek ee Guido Albers ayaa yiri: “Cristiano waxa uu yimid Jimcihii, waana ognahay in uusan war wanaagsan inuu ahayn.
Guido Albers waxa uu sheegay in Pogba, Bruno Fernanades iyo xiddigo kale oo khadka dhexe ah uu kula tartamo Van de Beek booska safka hore, waxaana uu xusay inay suuqii kala iibsiga ay wadahadallo la furteen kooxo kale, laakiin uu Macallin Ole u sheegay in aysan wax su’aal ah ka taagnayn kulammada uu ciyaari doono Donny.
Van de Beek ayaa 36 kulan u ciyaaray Manchester United tartammada oo dhan intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey Kooxda, iyadoo ay 35 milyan oo gini ay kaga soo qaateen Ajax, balse inta badan waxa uu fadhiyaa kursiga keydka.